mairie-antananarivo – Fihofanana ho an’ny mpampiofana
administrateur 18 aprily 2018 Commentaires fermés
Nikarakara fihofanana ho an’ireo mpampiofana eny anivon’ny boriboritany enina ny Ben’ny Tanànan’Iarivo Lalao Ravalomanana momba ny Tetik’asa Mampiharisoa izay manasongadina ny atao hoe : Vokatra Agroekolojika. Nosokafan’ny Tale misahana ny Sosialy ao amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra Andriantsehena Prisca ny fotoana ny Alarobia 18 Martsa 2018 tao amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ; Anisan’ny manohana ity Tetik’asa ity ny Vondrona Eropeana.
Manana ny mampiavaka azy ny tontolon’ny vokatra Agroekolojika araka ny fanazavana ka anisany ny fahafahana mitantana ny otrikarena izay entina mamokatra toy ny rano, ny tany, ny zavamaniry, maro rahateo ny tombotsoa ho azo toy ny fikajiana ny tontolo iainana, ny fitandroana ny fahasalamana, ny fahazahoana tombony eo amin’ny fidiram-bola sy ny fivelaran’ny olona amin’ny fiainany ankapobeny.
Nambara ihany koa nandritra ny fanokafana fa ny fananan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra mpampihofana dia manampy ny mpanjifa amin’ny fahafantarana ny vokatra Agroekolojika. Tsy hijanona fotsiny amin’ny fanazavana ny fihofanana fa hisy ny fampiharana eny amin’ny toerana izay hambolena.